Afaka manampy ahy hisafidy ny tenimiafina tenimiafina Amazon ahafahana hitarika ny tsena ve ianao?
Na inona na inona indostria na ny sokajin'ny vokatra anananao, dia tokony hitazona tsara ny pejin'ny vokatrao ianao mba hahazoana vintana matanjaka kokoa amin'ny fanatanterahana ny fivoaran'ny fivarotana lehibe. Raha Amazon dia mety ho mpivarotra ecommerce sy mpivarotra entana manerantany, dia efa be loatra ny zavatra tokony hatao, be loatra ny manara-maso, ary be loatra ny manatsara azy any. Noho izany, ahoana no fomba hitantanana ireo asa rehetra mandany fotoana sy mahatsiravina ireo indraindray? Ity no tena marina rehefa tonga ao an-tsehatra ny traktera maotera Amazon sy ny fitaovana fikarohana fifaninanana.
Mazava ho azy fa tsy misy rindrambaiko farany na rafitra an-tserasera mba hanao ny zava-drehetra ho anao amin'ny fomba samirery. Saingy ny singa tracker fampiasana tenimiafina manaraka sy ireo mpilatsaka an-tserasera manampy ireo dia afaka manao izay zavatra mora kokoa. Farafaharatsiny dia ireo fikarohana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana lalindalina kokoa sy ny fahaiza-mandinika manan-danja izay mifanentana amin'ny fomba tena ilaina mba ho tafavoaka velona ao amin'ilay tsena tena marefo sy mavitrika indrindra.
Tena maniry aho handray ity fitaovana fikarohana Ny fitadiavana goavana tahaka ny vahaolana ankapobeny an-dalamby mba hanohizanao amin'ny fikarohana lalindalina ny teny fikarohana momba ny teny fototra dia nampisongadina ny lalana marina hatramin'ny voalohany. Midika izany fa na eo aza io fitaovana tsy ampiasaina io dia tsy voafaritra manokana amin'ny fivarotana amin'ny Amazon, dia mbola tena ilaina tokoa ny hahazoana sary lehibe amin'ny fandrindrana fikarohana mety ampiasain'ireo mpividy entana eran'izao tontolo izao, ary koa manana fahalalana fototra momba ny voka-pikarohana fikarohana ary ny haavon'ny fifaninanana amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ny fehezan-teny manan-danja efa ela be.
Mariho fa ny Google Keyword Planer ihany no dingana voalohany eo amin'ny fomba fitarihana ny fitarihana amin'ny tsena. Midika izany fa tsy maintsy misafidy ny fampiasana tenimiafina fampiasana tenimiafinao amina toe-javatra misy anao any amina toe-javatra rehetra ianao - raha te hanalavitra ny famoahana sary maromaro mipoitra avy amin'ny loharano maro samihafa izay tsy voatery hanana fikasana hividy mafy.
Na dia tsy maimaim-poana aza ny fitaovana fampiasa maotina manaraka Amazon (maimaim-poana 20 dolara isam-bolana) , azo antoka. Ny soso-kevitry ny soso-kevitry Freshword dia mety ho lasa toerana mahafinaritra mba ahafahana misimisy kokoa ireo sora-baventy manan-danja sasantsasany, ireo vahaolana mahasoa sy mahavariana, ny teny LSI amin'ny teny lava be, ary koa ny sora-baventy azo ampiasaina tsara - izay mihoatra lavitra noho ny concept of Search Engine Optimization. Raha tokony hametra-pialàna amin'ny fitaovana fototra iray fotsiny ianao, na ny fandaniam-bola amin'ny safidy avo lenta sy ny karama azonao, dia manoro hevitra aho ny hanandrana FreshKey ho loharanom-pandrindrana ho an'ny teny mahaliana ary zavatra mahasoa indrindra raha ny fanesorana ny teny fikarohana mety mety mety mety ary koa ny fanararaotana ny fahaizanao miavaka amin'ny Amazon.
Ny fitaovana maoderina tenimiafina farany momba an'i Amazon amin'izao fotoana izao dia Soovle, vahaolana maimaim-poana sy mora ampiasaina ho an'ny fihazonana ny lisitry ny vokatra misy anao hatrany hatrany nefa tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fikarohana fikarohana. Tsidiho ny fangatahana vokatra ankapobeny ampiasain'ireo mpivarotra mivarotra ny fividianana andavanandro fa tsy amin'ny Amazon ihany, fa eo amin'ny sehatra ecommerce malaza hafa, toy ny eBay na Alibaba. Ankoatra izany - ity mpanampy an-tserasera ity dia afaka maneho ny lafiny matanjaka indrindra indrindra raha ny fanentanana amin'ny firongatry ny adihevitra be mpandala ny teny manan-danja sy ny fanandramana amin'ny fampiasana ireo karazana fikarohana karazana ampiasain'ireo mpampiasa mivelona amin'ny fitaovam-pikarohana lehibe maro Source .